Kenya oo lagu Eedeeyay in ay Dhuxul ka dhoofiso Kismaayo – Radio Daljir
Maajo 25, 2015 3:36 b 0
Isniin, May 25, 2015 (Daljir) — War bixin dheer oo kasoo baxday Qaramada Midoobay Qaramada Midoobey, ayaa lagu sheegay in shirkadaha ganacsiga Kenya iyo ciidamadooda difaaca ay ka qeyb qaataan dhoofinta dhuxusha Sharci darada ah ee laga dhoofiyo dekeda magaalada Kismaayo.
Qaramada Midoobey ayaa sheegtay in dowladda wadanka Kenya ay sanad walba dhoofinta dhuxushaan sharci darrada ah ka hesho aduun lacageed oo gaaraya 22 million oo lacagta Kenyan-ka ah, ayna u adeegsato kobcinta dhaqaaleheeda.
Warbixinta oo kasoo baxday gudiga daba galka cunaqabataynta ee Soomaaliya iyo Eritrea ayaa marlabaaad lagu sheegay in ciidamada Kenya ay ku lugleeyihiin ka ganacsiga dhuxusha sharci darada ah ee laga dhoofiyo magaalada Kismaayo oo Alshabaab laga saaray seddex sano ka hor.
Warbixintaan ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in dhaqaalahaasi ay qaybsadaan dowladda wadanka Kenya iyo maamul goboleedka Jubbaland ee gacanta kuhaya dekeda magaalada Kismaayo, waxaase xusid mudan in ururka Alshabaab dhaqaalahaasi qayb kahelo.
Al-shabaab oo la wareegtay deegaanka Janaale